Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon – Qormadii 23aad | Somaliland Post
Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon – Qormadii 23aad
Tan iyo maalintii ugu horeysay ee aan qallinka u qaatay in aan si taxane ah idiinku soo gudbiyo qormooyinkan fal-celiska u ah, qoraalada runta ka fog ee uu Boobe sida joogtada ah Wargeysyada ugu qorayey, waxaan idiinka sheekaynayey oo ay qoraaladaydu ku koobnaayeen ka waramida mucjisadii nagu soo martay Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta, mudadii u dhaxaysay 19/3/12ka-4/9/12ka. Iyo weliba qaar ka mid ah waxyaabihii yaabka badnaa ee wasaarada ka dhacay mudadaas oo uu Boobe ka ahaa wasiir.
Maantase waxaan jeclaystay in aynu ka taalawno xuduuda u dhaxaysa labada wadan ee Somaliland iyoEthiopia, si aynu socdaal kooban oo xaqiiqo raadis iyo tamashle ah ugu soo marno magaalooyinka Herar, Dirirdhaba iyo Addis-Ababa oo ka mid ah meelihii kala duwanaa ee ay xilligii halganka joogi jireen mujaahidiinta ururkii SNM. Kuwaas oo aynu tegidooda uga dan leenahay in aynu ka soo ogaano, ama ka soo helno xogo wax-ku-ool ah oo la xidhiidha kaalintii uu Boobe kaga jirey halgankii ururka SNM ee dib u xorayntaSomaliland, waxtar iyo waxyeelo midka ay ahayd.
Hadaba markii aan sameeyey baadhitaano ku saabsan kaalintii uu Boobe kaga jirey halgankii SNM, ee aan waraystay mujaahidiin faro badan oo SNM ah, waxaa ii soo baxay waxyaabo faro badan oo ay ka mid tahay sheekada hoos ku xusani, waana tan sheekadaasi.
Boobe ma ahayn nin lagu yaqiin inuu ka hawlgalo furimaha dagaalka xiligii uu socday salgankii hubaysnaa ee SNM Sanadihii lagu jiray halgankii qadhaadhaa, Boobe wuxuu ku noolaan jiray magaalooyinka Addis-Ababa iyo Diri-Dhaba. Marka uu ugu soo dhowaado wuxuu soo gaadhi jiray magaalada Jig jiga oo guri laga siiyey. Marka kaliya ee la arki jiray Boobe isaga oo qabanaya shaqo ay SNM leedahay waxay ahayd xiliyada uu ururku shirarkiisa qabsanayo oo keliya. Taasina waa sababta ay had iyo jeer Boobe marka uu wax ka qorayo taariikhda halgankii SNM sheekooyinkiisa oo dhami u noqdaan kuwo aan dhaafsiisnayn shirweyneyaashii ururka ama kalfadhiyadii golaha dhexe iyo guddida fulinta. Kuwaas oo uu qudhoodana uga hadlo ama uga waramo kolba sida uu isagu oo keliya.
Sidoo kalena maadaama ay Boobe waxbarashadiisu ahayd mid ku kooban dugsi sare , oo aanu wax jaamacad ah ka bixin, waxaa cuqdad nafsi aan weligiiba ka hadhin ku noqotay shahaado jaamacadeed la’aantii haysatay, arintaasina waa sababta uu ilaa maanta u jecelyahay ka qaybgalka Seminaarada yar yar ee marka ay dhamaadaan lagu bixiyo shahaadooyinka ka qaybgalka (Certificate of participation).
Xidhiidhkaas oo ahaa mid uu soo abaabulay ninka la yidhaahdo Boobe Yuusuf Ducaale waxa ay ujeedadiisa gaabani ahayd sidii ay Liibiya ururka SNM ugu dhex yeelan lahayd ashkhaas danahooda u fulisa oo ku xidhan Sirdoonka Liibiya. Halka ay ujeedadiisa fogina ahayd sidii ay SNM ugu dhex milmi lahayd ururkii SSDF ee uu hogaaminayey Colonel Cabdilaahi Yuusuf oo laftiisu ahaa nin Camiil u ahaa, isla markaana ka amar qaadanayey kalidii taliyihii Liibiya ee Mucamar Al-Qaddaafi.
Waftiga SNM ee Liibiya tagay waxa hogaaminayey gudoomiyhii ururka SNM ee xiligaa Marxuum Sheekh Yuusuf Cali Guray Sheekh Madar, waxaana xubnaha wefdigaasi ka mid ahaa xoghayihii guud ee ururka marxuum Axmed Ismaaciil (Dukhsi), Cabdisalaan Yaasiin, Xasan Ciise Jaamac, Ciise Curaagte, Cabdirisaaq Caqli, Maxamuud Xaaji Jaamac (Dable), Cabdi Ibraahim (Jaale-diid).
Nimankaasi dhamaantood waxay ahaayeen rag ku wadh-wadhay luqadaha Carabiga iyo Ingiriisiga qaarkoodna waxaabay ku hadli jireen 4 ilaa 5 Af oo qalaad.